Omega Drill ee Israa'iil waxay barbardhigtay dillaaca nooc cusub oo COVID-19 ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Israa’iil Wararka Jebinaya » Omega Drill ee Israa'iil waxay barbardhigtay dillaaca nooc cusub oo COVID-19 ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dadka • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Technology • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Omega Drill ee Israa'iil waxay barbardhigtay dillaaca nooc cusub oo COVID-19 ah.
Waxaa lagu amaanay sida aduunka ugu horreeya xafiiska Bennett, ciyaaruhu waxay eegaan u diyaargarowga xayiraadaha mustaqbalka ee shirarka iyo dhaqdhaqaaqa, karantiilnimada iyo siyaasadaha xirida, iyo sidoo kale tijaabinta kormeerka iyo digniinaha la soo saarayo marka nooc cusub uu soo baxo. Tababarku wuxuu kaloo tijaabiyaa jawaabaha isbitaallada, iyo sidoo kale u diyaarsanaanta qaybaha kale.
Jilitaanka ayaa waxaa Twitter-ka ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Naftali Bennett Arbacadii.
Bennett wuxuu si joogto ah u tixraacay 'Omega strain' si uu u qeexo isbeddelka fayraska xiga ee aan weli la helin.
Dhoolatuskan oo uu hoggaaminayo wasiirka difaaca madaniga ah ee Israa’iil ayaa ka dhacay qol xaaladeed oo ku yaalla xarunta maamulka qaranka ee magaalada Qudus.
Dawladda Israa'iil ayaa ku dhawaaqday billowga layli-ku- celcelinta waddanka oo dhan oo ah qaab 'ku celcelin dagaal' si loo qiimeeyo u diyaargarowga waddanku u leeyahay faafitaanka nooc cusub oo aan la garanayn oo ah fayraska COVID-19.
Israa'iil's Ra'iisul Wasaaraha Naftali Bennett, oo inta badan tixraaca isbeddelka fayraska ee soo socda, oo aan weli la ogaanin, sida 'Omega strain', ayaa ku dhawaaqay layliga si habboon loogu magacdaray 'Omega drill' Arbacadii.
Dhoolatuskan oo uu hoggaaminayo wasiirka difaaca madaniga ah ee Israa’iil ayaa ka dhacay qol xaaladeed oo ku yaalla xarunta maamulka qaranka ee magaalada Qudus. Layligu wuxuu dhigayaa in hay'adaha dalka iyo hay'adaha dawladda ay maraan heerarkooda si ay u ogaadaan haddii ay awoodi doonaan inay la tacaalaan wejiga "kala duwanaanshaha COVID-19 cusub ee dilaaga ah."
"In kasta oo meelaha qaar ee adduunka, xaaladda coronavirus ay sii xumaanayso, Israa'iil waa ammaan oo ammaan," Bennett ayaa yidhi. "Si aan tan u ilaalino, oo aan u sii wadno hawl maalmeedkeena, waa inaan farteena ku haynaa garaaca wadnaha oo aan u diyaargarowno xaalad kasta."
The Ra'iisul Wasaaraha ammaanay Israa'iilJawaabta uu ka bixiyay masiibada, isaga oo ku dhawaaqaya in gobolka "uu ku jiro qaab aad u wanaagsan" isagoo garaacay mawjadda afaraad ee cudurrada, isagoo raaciyay inay " qarka u saaran tahay inay ka tagto Delta [kala duwanaanshaha]."
Israa'iil waxay noqotay mid ka mid ah waddamadii ugu horreeyay ee soo saara nidaamka tallaalka xoojinta xagaaga, laga bilaabo dadkeedii hore oo ka shaqeeya kooxaha da'da kale. Bennett wuxuu amaanay nidaamka, isagoo ku dhawaaqay in Israa'iil ay ahayd "hormoodka qiyaasta saddexaad" ee ka dhanka ah COVID.
Omega Drill ee Israa'iil wuxuu u ekaysiiyaa dillaaca nooc cusub oo COVID-19 ah - Waxaa qoray Dhiigga Wanka wuxuu leeyahay,
Nofeembar 28, 2021 at 15: 22